Ukuvakasha kwefektri - Shenzhen Spocket Technology Co., Ltd.
I-SPOCKET ingelinye lamafektri abalwa phezulu anezinsiza zokukhiqiza ezithuthukile, ubuchwepheshe obusezingeni eliphakeme kanye nokusebenza kanzima kochwepheshe ngokuthembekile ezimakethe zasemakhaya nezangaphandle. Inendawo yokukhiqiza engamamitha-skwele ayi-2000 yezitendi zokubonisa nezintambo zokuphepha sezizonke. Yonke imishini isekhwalithi enhle, enezinga elithunyelwa kwamanye amazwe.
Sisekela izinsizakalo ze-OEM / ODM!
Sinikeza wonke amakhasimende anemikhiqizo nezinsizakalo ezingezansi ezisezingeni eliphakeme ze-OEM ne-ODM ukuhlangabezana nemfuneko yakho.
• Nikeza i-OEM Service
• Nikeza i-Design Service
• Nikeza ilebula lomthengi
• Ukunikezwa Komthengi Ukupakisha
Sine 4 R & D amaqembu nge onjiniyela abanolwazi 10 abantu.
Nalu uchungechunge lwemikhiqizo enjenge: POS / tablet PC / mobile holder holder, anti-theft dispaly stand, adjustable display device, anti-theft pull box, plastic coiled lanyard, steel wire lanyard, safety rope lanyard, security cable lock, sewing imichilo eshintshekayo, ibheji reel, ithegi yensimbi, izinsimbi ezinzima.
Sinamamodeli amaningi wemikhiqizo yokuphepha ukuhlangabezana nezidingo ezahlukahlukene. Eminye imikhiqizo yethu iklonyeliswe ngokuhlonishwa okuphezulu nezincomo ezivela kumakhasimende ekhaya nakwamanye amazwe ngemuva kokungena emakethe.